Baro sida loo isticmaalo barnaamijka 'COINBASE' si aad ugu iibsato bitcoin-kaaga ugu horreeya iyo cryptocurrencies-kaaga ugu horreeya
Tababarkani waa adiga haddii:
Waxaad dooneysaa inaad kaladuwanaatid maalgashigaaga;
Waxaad xiiseyneysaa lacagaha loo yaqaan 'crypto-currencies' iyo gaar ahaan Bitcoin;
Ma garanaysid meesha iyo sida loo iibsado;
Waxaad ogaatay in meheradaha wax iibsigu ay yihiin kuwo adag oo la isticmaalo.
Tababarkani wuxuu caawin doonaa bilowgayaasha doonaya talaabo talaabo ah hagto iyadoo la adeegsanayo barxadda COINBASE.
Waxaan ku tusayaa wax kasta oo shaashadda kala qaybsan si aad iigu raacdo aniga waqtiga dhabta ah:
Abuur akoonkaaga oo leh gunno $ 10;
Samee wareejintaada ugu horreysa;
Iibso bitcoins-kaaga koowaad ama ethereum;
Baro sida dib loogu iibiyo oo loogala noqdo faa'iidooyinkaaga;
Samee faylalka loo yaqaan 'crypto-currency portfolio';
Ku kasbashada cryptocurrencies-kaaga ugu horreeya mahadsanid EARN kuna beddel bitcoins.
Markii ugu horreysay ee aan xiiseynayo Seeraar, waxaan la kulmay dhibaatooyin qaarkood waxayna igu qaadatay wakhti in aan si buuxda u fahmo sida barnaamijkan noocan ahi u shaqeeyo. Xitaa waxaan sameeyay qaladaad markii aan bilaabay.
Waxaan go aansaday inaan abuuro tababarkan si aan ugu fududeeyo shaqadaada. Waxaa loogu talagalay qof kasta oo ku cusub koonkan. Waxaan ka fahmay maqalka dadka hareerahayga ah ee i weydiinaya meesha aan ku iibsaday shaykeyga sirta ah, sida aan u isweydaarsaday sarrifka iwm in dad badan ay u badan tahay in dib loo dhigay markay bilaabeen. Waxaan rajeynayaa in koorsadan ay noloshaada ka dhigeyso mid fudud oo waxtar leh!
COINBASE waa barxad loo yaqaan 'benchmark platform' ee adduunka ee loo yaqaan 'cryptocurrencies', waa uun ...
READ Mashruucayga Bilaabashadu miyuu taagnaadaa?
Ka iibso dhirtaada ugu horreysa Coinbase Oktoobar 15th, 2021Tranquillus
horeGanacsiga - 7 Maalgashiyo Faa'iido Leh
socdaCrypto: bilaabida Binance